News by site :: News Mada
Mihoatry ny arivo ireo nifindran’ny valanaretina: roa ny matin’ny Coronavirus, 77 ny tranga vaovao tao anatin’ny 48 ora
Mirongatra tanteraka ny Coronavirus. Maherin’ny 1 000 ireo nifindran’ity valanaretina ity hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Miisa sivy ireo maty ka anisan’izany ireo roa vao namoy ny ainy ny faran’ny herinandro teo. Roa ireo namoy ny ainy noho ny fihombon’ny valanaretina, ny zo...
Ressortissants malagasy: rapatriement de 64 travailleurs depuis Koweït
Fotoana fohy taorian’ny nahatongavany teny amin’ny hopitaly, tsy tana ny ain’ilay ramatoa, tompona tranombarotra mpamongady notafihin’ny jiolahy, tetsy Avaradoha, omaly. Teo amin’ny lohany no voan’ny bala. Naratra voatifitra ihany koa ireo anadahiny, izay voa teo amin’ny tongony...
Nisavorovoro ny tao Toamasina, omaly. Nametraka sakana sy nitora-bato mpitandro filaminana ireo andiana olona tao Ambalabe. Niditra an-tsehatra ny polisin’ny Fip. Nisy roa ireo naratra. Na izany aza, nifamahofaho ny momba ity fifanjevoana ity. Nidina tao Ambalambe ny mpitandro...
Tsy mbola nisy tahaka ity. Maromaro ireo maty any Toamasina amin’izao fotoana izao. Nahatratra 37 ireo fandevenana tao amin’ny fasan’ny kaominina any an-toerana raha ny tao anatin’ny telo andro monja. Mazava ny fepetra amin’ny tsy fahazoana mitondra razana mivoaka ny faritra Atsi...
Mitohy tsy re tsaika ny « Raharaha nahafaty ny Dr Daniel ». Nalain’ny zandary tao an-tokantranony, omaly ny Pr Stéphan. Nentina niakatra aty Antananarivo avy hatrany, niaraka amin’ny vady aman-janany. Nalain’ny zandary omaly, alahady maraina, tokony ho tamin’ny 9 ora sy 30 mini...